Best Video edezi Software maka Gamers
Ị nwere nza nke vidiyo si na The Epic egwuregwu nke oku nke ọrụ: Advanced Warfare ma ọ bụ Tanya Nchekwa onwe V, na chọrọ dezie ha, ma ọ bụghị agbaji akụ? Video edezi software maka gamers pụrụ inyere gị aka splice òkè nke dị iche iche videos, tufuo ibu meziri, ma tinye music na olu overs-eme ka ha ọzọ na-akpali na shareable. Na-eche ihe ndị kasị mma software ngwọta bụ n'ihi na gị oru ngo? Ebe a bụ ole na ole software nchịkọta na nwere ike ime na ọrụ:
Windows Live Movie Onye kere
N'ihi na isi edezi, ị nwere ike ghara iti ndị na-eri nke Windows Live Movie kere ya. WLMM bụ FREE, awade ezigbo mmetụta,-enye gị ohere mpikota onu, mee ka thumbnails, bee na dezie egwuregwu footage, na ọ bụ onye ọrụ-enyi na enyi n'ihi na ọbụna ndị kasị novice video eso. Dị ka ọtụtụ free ngwaahịa, ọ nwere ya na-agaghị emeli na ọtụtụ glitches. Ọ bụ ike ịzọpụta gị oru ngo ma ọ bụrụ na ị na-eji a iche iche omume iji tọghata ha, usoro ihe omume freezes mgbe mgbe, na mmepụta video na-agaghị emeri ọ bụla enọ.
The Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) bụ ihe ọnụ usoro ihe omume ma Mac na Windows. Ọ na-enye ihe karịrị 300 mmetụta, voiceovers, akụkụ Akwụkwọ Nsọ, ndepụta okwu na ọdịyo, tinyere n'usoro n'usoro, cropping, kewara na trimming ikike. Ọ nwere oge a na ọrụ-enyi na enyi interface, ezi ndịna-emeputa na PIP na mgbanwe nhọrọ mbụ naanị dị na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị oké ọnụ video software omume. N'agbanyeghị nke ahụ, a na usoro a haziri maka beginners na-eme ka ọ dị mfe na-etinye ọnụ egwu videos si gị mgbalị mbụ. Ya mere ọ bụrụ na ị bụghị a video edezi ọkachamara na-achọghị ime ihe ọ bụla hardcore edezi na gị gameplay E ma na-achọ a ọnụ ala, mfe iji ngwá ọrụ, Wondershare ga-a zuru okè oke. Ha na-enye a 30 n'efu ụbọchị ikpe otú ị pụrụ ịhụ ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ nke ọma n'ihi na unu.
Wondershare Awade 30 n'efu ụbọchị ikpe, download a oyiri n'okpuru:
Lightworks awade ọkachamara larịị edezi ndị na-achọ ya, bụ ndị dị njikere iji kwụọ hefty price na mkpado ma ịgbasi oge ọ na-ewe iji ịmụta otú iji ya nke ọma. Lightworks-arụ ọrụ na Windows, Linux ma ọ bụ OSX na a nwalere site ọkachamara editọ. Otú ọ dị, n'ihi na egwuregwu Player, ukwuu n'ime ka video edezi novices, nke a nwere ike ghara ịbụ a gbakwunyere. E nweghị ezigbo ihe enyemaka dị maka ọhụrụ ọrụ n'ime software, na na nnọọ isi hints iji nweta ị malitere. N'ozuzu, nke a bụ pro larịị software; ya abịa na a ọkachamara larịị na-eri na a nkpoda mmụta usoro.
Videopad Nna-ukwu Edition
Videopad-enye ihe mfe iji interface, na ihe mmezi ighikota na ma usoro iheomume ma ọ bụ storyboard edezi dị. E nwere free version, ma ọ na-enweghịzi nke ọtụtụ n'ime bara uru utilities na dị ka ịgbakwunye-na-akwụ ụgwọ. Ọzọkwa, free version gbachiri ala ọtụtụ nke ọrụ mgbe ị na-eji ya dị nnọọ a ugboro ole na ole, ọ na-maara na-a obere adọkpụ. Mma na-ịgbasi zuo price ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ nke a software, dị ka ị ga-enweta a zuru ezu ụlọ, ọ dịghị mmapụta mgbasa ozi na a smoother na-agba ọsọ version iji.
N'agbanyeghị ihe gị nka na ihe mgbaru ọsọ gị maka gị egwuregwu-akpọ videos, e nwere usoro ihe omume dị ona gị mkpa ọma. Onye ọ bụla n'ime ndị a video edezi software maka gamers nwere ike ime Job; dị nnọọ ekpebi nke bụ nri maka gị!
Top 5 Atụmatụ gị mkpa maara banyere gameplay edekọ
Top Awesome Android Games I Kwesịrị Iji Gbalịa
Top-atụ aro Android Games ime ụlọ
Top egwuregwu na android ma gụọ 2.3 / 2.2
Tụgharịa iPhone 6 n'ime a-arụ ọrụ Game Boy
Top 5 Halloween Party Games maka Kids
> Resource> Game> Best Video edezi Software maka Gamers